Xafiiska Xoolaha Beeraha iyo Horumarinta Reer-miyiga DDSI oo Warbixin ka Bixiyay 200 oo Cagaf oo Xukuumadu Soo iibisay. - Cakaara News
Xafiiska Xoolaha Beeraha iyo Horumarinta Reer-miyiga DDSI oo Warbixin ka Bixiyay 200 oo Cagaf oo Xukuumadu Soo iibisay.
Jigjiga(CN) Sabti Sept-19-2015.Waxaynu wada ogsoonahay in Taamyeelida iyo gaadhida horumar waara oo aan soo noqod’lahayni ka bilaabmo dajinta siyaasad iyo istaraatajiyado bar tilmaameedkeedu yahay awood siinta iyo wax u qabashada bulshada waana tilmaanta jiritaanka hogaaminta ay ka go’antahay gaadhsiinta shacabka koboc dhaqaale oo buuxa.
Haddaba xukuumada DDSI sanadihii ugu danbeeyay waxay istaraatajiyadaha horumarineed u qaadatay kobcinta awooda wax soo saarka beeraha oo laaga faaiidaysanayo tabaha casriyaysan , waana in bulshadu hesho aaladaha casriga oo sahlaysa wax soo saarka beeraha oo la jaanqaadi kara kuwa hadda ka jira caalamka wax soo saarkoodu horeeyo.
Wasiir ku xigeenka xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reermiyiga DDSI mudane Guuleed aw Cali Kaahin oo u waramay shabakada wararka ee cakaaraNews ayaa faah’faahin dheeriya naga siiyay 200 oo cagaf’cagaf oo dhawaan ay xukuumada DDSI soo gaadhsiisay xarunta deegaanka ee jigjga.
Wuxuuna si qoto dheer uga warbixiyay ahmiyada iyo ujeedooyinka ay xukuumada DDSI u soo dajisay cagaf’cagafyadani taasi oo uu sheegay in ay sal u tahay hirgalinta gorshaha koboca dhaqaalaha ee jaanqaadka 2aad GTP2 iyo sidii loo qalajinlahaa loona tir tirilahaa saboolnimada iyada oo xooga la saarayo abuuritaanka ilaha shaqada ee dhalinyarada iyo haweenka oo looga faa’iidaynayo fidinta xidhmooyinka horumarineed ee iskaashatooyinka wax soo saarka beeraha oo casriya.
Waxa uu wasiir ku xigeenku sheegay in cagaf’cagafyadani ay hordha u yihiin bilowga qorshaha GTP2ga oo hadda loo qaybindoona bulshada danyarta ah ee beeralayda ah laguna siindoono dayn bilaa ribo ah oo wakhti dheer lagu soo celindoono.
Mar uu wasiir ku xigeenka ka ha hadlayay dhumucda iyo baaxada khayraadka dhulkeena ayaa waxa uu yidhi”
Deegaankenu wuxu leyahay cilimo beereed ka badan 1,813,204 Hectar oo waraab looga faa'iideysan karo (potential irrigable Land), inkaasto Ila hada dhul bereedka laga faa'iideysto ayaa ka yar 15%. Hadaba si aan uga wada faa'iideysano kheyraadka dhulka iyo Wabiyada degaanku hodanka ku yahay ayaa waxaa lagama marmaan noqotey soo ibiinta 200 ee Cagaf-cagafyada ah. Qorshaha GTP II ee xafiisku waa in la laba’jibaro dhulka la beerto oo wakhti xadirkaan dhan 650,500 Hectar in la gaadhsiiyo 1.5 million hectares. Ugu danbeyn, Cagaf-cagafyada waxaa shaqo abuur looga sameeyn doona dhalinyaaro ka badan 300, oo laa bari doono daraawal nimo iyo farsaamo yaqaanaba.
Hadaba, waxaa hubaal ah in xukumada ay ka go'aan tahay in ay abuurman bulsho badan oo xoolodhaqato-beeraley ah islamarkana mudo kobaan haantilayaal ku noqoon doona.
Isku soo wada xooriyoo waxa hubaal ah in xukuumada DDSI ay ka gudubtay habkii hore ee wax soo saarka beeraha oo ahaa mid caajis ah oo wakhti lumis ah una gudubtay hab casriyo oo ku qotoma wax soo saarka beeraha kaasi oo awooda saaraya xaqiijinta kobcinta awooda beeraha oo nolosha bulshada iyo dhaqaalaha deegaankaba hor u qaadaya.